December 2019 – Kalfadhi
Xildhibaannada labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya, ayaa maanta xarunta Villa Hargeysa ku yeeshay kalfadhiga 6-aad ee kulanka wadajirka ah, fadhigaasi oo ay soo xaadireen 191-Xildhibaan. Kalfadhiga 6-aad ee maanta ayaa ajendihiisu ahaa Akhrinta 3-aad ee warbixinta guddiga ee Odoroska Miisaaniyadda Qaranka ee sanadka 2020-ka. Xoghayaha Guddiga Maaliyadda, Miisaaniyadda, Qorsheynta iyo la Xisaabtanka Hay’adaha ee Golaha Shacabka Xildhibaan Aadan Cali Hassan Jamhuuriya, ayaa Xildhibaanadda u faah faahiyay Warbixinta guddiga ee Odoroska Miisaaniyadda Qaranka ee sanadka 2020-ka. Mudanayaasha labada Aqal ee Baarlamaanka, ayaa intaasi kaddib bilaabay in ay u codeyaan miisaaniyadda sanadkan…
December 31, 2019 Hassan Istiila
Xildhibaannada labada aqal ee Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta oo Talaado ah la filayaa inay wadajir u ansixiyaan Miisaaniyadda Sanadka 2020, kaasi oo maalmihii la soo dhaafay ay ka doodayeen. Ansixinta miisaaniyaddaan ayaa ku soo beegmaysa maanta oo ah maalintii ugu danbaysay sanadka 2019, si sanadka 2020 oo berri ka bilaabanaya loogu shaqeeyo miisaaniyadda cusub. Xildhibaannada labada ayaa maalmihii la soo dhaafay su’aalo ka weydiinayay miisaaniyadda Wasiirka Maaliyadda, waxaana su’aalaha ay u badnaayeen sida loo isticmaalayo iyo qarashaadka loo qoondeeyay hay’adaha dowladda, iyadoo ay xusid mudan tahay in…
Aragti Baarlamaanka Hindise-Sharciyeedyo Warar
December 30, 2019 December 30, 2019 Hassan Istiila
Kal-fadhiga 6-aad kulankiisa 4-aad ayay si wada jir ah shalay u yesheen xillibaanadda labada Aqal ee Barlamaanka Soomaaliya, iyada oo uu ajandaha kulanka ahaa Akhrinta 2-aad ee warbixinta hindise-sharciyeedka miisaaniyadda Qaranka 2020-ka. Gudoomiyayaasha labadda aqal ee Golaha shacabka iyo Aqalka Sare, ayaa si wada-jir ah u shir-guddoominayay Kal-fadhiga 6-aad kulankiisa 4-aad. Guddoomiyaha guddiga maaliyadda iyo miisaaniyadda ee Barlamaanka Soomaaliya Xildhibaan Maxamuud Siraaji, ayaa xillibaanada labada aqal u aqriyay warbixintaasi, waxaana intaasi ka dib bilaabatay doodaha-soo-jeedinta eek a imaaneysay xildhibaannada. kulanka waxaa si wada jir ah u shir gudoominaya gudoomiyayaasha labadda…
Madasha Xisbiyada Qaran oo xalay shir ku yeeshay magaalada Muqdisho, ayaa waxaa ay uga wada-hadleen sidii gurmad iyo garab istaag loogu sameyn lahaa dadkii Soomaaliyeed ee wax ku noqday qaraxii maalin ka hor ka dhacay Ex Koontarool Afgooye. Shirkan ay isugu yimaadeen Madasha Xisbiyada Qaran oo uu shir guddoominayay Sheekh Shariif ayaa looga hadlay sidii taageerayaasha Xisbiyada ku mideysan Madasha iyo Umadda Soomaaliyeed loogu abaabuli lahaa inay doorkooda qaataan. Sidoo kale waxaa laga hadlay sidii Guddi qiimeyn ku sameeyay qaraxii maalin ka hor ka dhacay iyo khasaarihii uu geystay loogu…
December 29, 2019 Hassan Istiila
Xildhibaannada golaha Shacabka ee Soomaaliya ayaa cod aqlabiyad ah ku meelmariyay sharciga doorashada ee dalka. Sharcigan ayaa waxa uu qorayaa in doorasho qof iyo cod ah lagu qabto deegaan doorasho-kasta, walow aanay caddayn tirada la ogolyahay inay codeeyaan. Madaxweynaha ayuu sharcigu qorayaa inay dooran doonaan xubnaha Golaha Shacabka iyo kuwa Aqalka Sare, halka Ra’iisul Wasaaraha uu soo magacaabi doono xisbigii ku guulaysta aqlabiyadda baarlamaanka. Xildhibaan Zakariye Maxamuud Xaaji Cabdi, gudoomiyaha Xisbiga Garsoor oo ka mid ahaa xildhibaanaddii ansixiyay sharciga doorashada ee dalka ayaa waxa uu sheegay in markii hore shanta…
Xildhibaan Fiqi “Kalsooni weyn ayaan ku qabnaa guddiga soo diyaariyay Sharciga Doorashooyinka”
December 29, 2019 December 30, 2019 Hassan Istiila
Xildhibaan Axmed Maclim Fiqi oo ka tirsan golaha shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in Golaha Shacabka doorkooda keliya uu yahay in ay ansixiyaan sharci balse aysan iyaga u yaallin in dalka ay ka dhacdo doorasho Qof iyo Cod ah, sida uu hadalka u dhigay. Xildhibaanka ayaa sheegay in Baarlamaanka uu ansixiyay Sharciga Batroolka iyaga oo aan oggeyn halka batroolka uu ku jiro. Waxaa uu sidoo kale uu sheegay in kalsooni weyn ay ku qabaan guddiga soo diyaariyay sharciga doorashooyinka. “Sharciga Doorashooyinka Qaranka oo aqriskii kama danbayska ahaa la hor…
Baarlamaanka oo ansixiyay sharciga doorashooyinka
December 28, 2019 Hassan Istiila
Xildhibaannada Golaha Shacabka ayaa maanta xarunta Villa Hargeysa ku yeeshay kulankoodii caadiga ahaa kaas oo ajandihiisu ahaa sii-wadida dooda Akhrinta Saddexaad ee Sharciga Doorashooyinka Qaranka soomaliya oo dhawaan Xildhibaanada loo qeybiyay. Shirka waxaa shir guddoominayay gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh craxmaan iyadadoona ugu dambayn Xildhibaanada Golaha Shacabka ay ansixiyeen Sharciga doorashooyinka Qaranka oo maalmihii lasoo dhaafay ay ka lahaayeen dood adag. Shirka maanta la ansixiyay ayaa waxaa oggolaatay oo Haa ugu codeysay 171 xildhibaan. “Sharciga Doorashooyinka Qaranka waxaa ogol u codeeyay (Haa) 171 waxaa diiday 5 Xildhibaan, waxaana ka…
Golaha Shacabka oo ka tacsiyadeeyay Qaraxii maanta ka dhacay Mogadishu
Qarax ay ku dhinteyn dad kor u dhaafaya 76 qof , ayaa maanta ka dhacay isgoyska ex-control ee duleedka magaalada Muqdishu. Qaraxa sidoo kale waxaa ku dhaawacmay in kabadan 90 qof. Xildhibaanadda golaha Shacabka oo maanta yeeshay kulankooda 27-aad ee kalfadhiga lixaad waxa ay marka hore ka tacsiyadeeyeen Qaraxii maanta ka dhacay isgoyska ex-control. “Dadkii halkaasi ku shahiiday rabi naxriistii jano ka waraabiyo kuwii ku dhaawacmayna Allah ha caafiyo”, ayey yiraahdeen xildhibaannada golaha shacabk. Xildhibaannada qaar kamid ah ayaa laamaha ammniga ugu baaqanay in baaritaan lagu sameeyo qaraxii maanta dadka…
Muxuu muhiim u yahay sharciga Maareynta Maaliyadda Guud iyo sharciga Shirkadaha Ganacsiga?
December 28, 2019 December 30, 2019 Hassan Istiila
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saxiixay sharciga Maareynta Maaliyadda Guud iyo sharciga Shirkadaha Ganacsiga oo hagaya qorsheyaasha dowladda ee dib u habeynta dhaqaalaha iyo la dagaallanka musuq-maasuqa. Madaxweynaha ayaa ku bogaadiyey Xildhibaannada Labada Aqal ee Baarlamaanka dadaalka ay ku bixiyeen sidii loo turxaan bixin lahaa, loona dhammeystiri lahaa sharciyadan oo waxtar weyn u leh hannaanka hufnaanta Maamul iyo xaqiijinta doorka dowladda kaga aaddan qaabeynta ganacsiga iyo dhaqaalaha dalka. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tilmaamay in sharciga Shirkadaha Dalku uu si gaar ah u dhiirri gelinayo ganacsiga,…
December 26, 2019 December 26, 2019 Hassan Istiila
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxaan, ayaa shalay ugu baaqay Guddiga diyaarinta sharciga Doorashooyinka Qaranka in ay xoogga saaraan ka hor dhammaadka bishan December in sharcigan la ansixiyo. Guddiga diyaarinta sharciga Doorashooyinka Qaranka, ayaa wali laga sugayaa in ay soo dhammeystiraan sharciga ayna usoo gudbiyaan Baarlamaanka Soomaaliya, sid dooda ugu dambeysay ay uga yeshaan xildhibaannada Baarlamaanka Soomaaliya. “Maadaama waqtiga uu aad u yaryahay waxaa looga baahanyahay Guddiga diyaarinta sharciga Doorashooyinka Qaranka in ay xoogga saaraan ka hor dhammaadka bishan December, in sharcigan la ansixiyo,…